Airbus: Fampanantenana vao haingana ny fanadihadiana momba ny famoahana solika maharitra 100% vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Airbus: Fampanantenana vao haingana ny fanadihadiana momba ny famoahana solika maharitra 100% vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny fikarohana voalohany avy amin'ny fandalinana voalohany eran-tany momba ny fiantraikan'ny solika 100% maharitra (SAF) amin'ny motera roa amin'ny fiaramanidina ara-barotra dia nanome vokatra mialoha.
Ny fianarana ECLIF3, ahitana Airbus, Rolls-Royce, foibem-pikarohana alemana DLR ary mpamokatra SAF Neste, dia manamarika ny fotoana voalohany nandrefesana 100% SAF niaraka tamin'ny motera roa amin'ny fiaramanidina mpandeha ara-barotra - Airbus A350 fiaramanidina mandeha amin'ny milina Rolls-Royce Trent XWB.
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny andrana entona entona eny amin'ny sidina sy ny fitiliana an-tanety mifandraika amin'ny programa ECLIF3 ary vao haingana no nitohy. Ny ekipa interdisciplinary, izay ahitana mpikaroka avy amin'ny National Research Council of Canada sy The University of Manchester, dia mikasa ny hamoaka ny valiny ao amin'ny diary akademika amin'ny faran'ny taona ho avy sy 2023.
Ny fikarohana avy amin'ny fanadihadiana dia hanohana ny ezaka atao amin'izao fotoana izao ao amin'ny Airbus sy Rolls-Royce mba hiantohana ny sehatry ny fiaramanidina ho vonona amin'ny fampiasana lehibe ny SAF ho ampahany amin'ny hetsika midadasika kokoa amin'ny fanafoanana ny indostria. Amin'izao fotoana izao, ny fiaramanidina dia tsy mahazo miasa afa-tsy amin'ny fangaro SAF 50% sy solika mahazatra mahazatra, saingy samy manohana ny fiara ny orinasa roa mba hanamarina ny fampiasana SAF 100%.
Tamin'ny volana aprily, ny A350 nanidina sidina telo namakivaky ny Ranomasina Mediterane nanenjika fiaramanidina DLR Falcon mba hampitahana ny entona entona estera sy asidra matavy (HEFA) ao anaty sidina amin'ny sidina. Nanao fitiliana fanarahan-dalàna tamin'ny fampiasana SAF 100% ihany koa ny ekipa ary tsy nisy olana momba ny asa.
Nitohy tamin'ity volana ity ny fitiliana etona amin'ny sidina amin'ny fampiasana SAF 100% sy ny fangaro solika HEFA/Jet A-1, raha toa ka natao ihany koa ny fitiliana ny entona miompana amin'ny tany mba hamaritana ny tombontsoa azo avy amin'ny SAF amin'ny kalitaon'ny rivotra ao an-toerana. Hitan'ny ekipan'ny mpikaroka fa ny SAF dia mamoaka potikely vitsy kokoa noho ny solitany mahazatra amin'ny fepetra fiasan'ny maotera rehetra voazaha toetra, izay manondro ny mety hampihena ny fiantraikan'ny toetr'andro sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny rivotra manodidina ny seranam-piaramanidina.
Ho fanampin'izany, ny SAF dia manana hakitroky ambany kokoa nefa avo kokoa ny votoatin'ny angovo isaky ny kilao amin'ny solika raha oharina amin'ny kerosene mahazatra, izay mitondra tombony amin'ny fahavitan-tsolika amin'ny fiaramanidina noho ny fihenan'ny fandoroana solika sy ny fatran'ny solika ho an'ny sambo mba hahatratrarana ny iraka mitovy. Mandeha ny fanadihadiana amin’ny antsipiriany ataon’ny ekipa.
"Ny maotera sy ny rafitra solika dia azo andrana eny an-kianja fa ny hany fomba hanangonana ny angon-drakitra momba ny entona feno ilaina amin'ny fahombiazan'ity programa ity dia ny manidina fiaramanidina amin'ny toe-javatra tena izy," hoy i Steven Le Moing, New Energy Program Manager at Airbus. “Fitsapana an-tsambo ny A350 dia manome tombony amin'ny famantarana ny famoahana maotera mivantana sy ankolaka, ao anatin'izany ny potika avy ao ambadiky ny fiaramanidina amin'ny toerana avo. "
Simon Burr, Talen'ny Fampandrosoana ny vokatra sy ny Teknolojian'ny Rolls-Royce, Civil Aerospace, dia nilaza hoe: "Ity fikarohana ity dia manampy amin'ny fitsapana efa nataontsika teo amin'ny moterantsika, na teny an-tany na eny amin'ny rivotra, izay tsy nahita sakana ara-teknika amin'ny fanenjehana. ny maotera mandeha amin'ny 100% SAF. Raha tena manafoana ny fitsangatsanganana an'habakabaka lavitra izahay, dia singa manan-danja ny SAF 100% ary manolo-tena izahay hanohana ny fanamarinana ho an'ny serivisy. "
Ny fiaramanidina DLR Falcon chaser dia manana probe maromaro handrefesana ny entona amin'ny haavon'ny dia mankany amin'ny halavirana 100 metatra miala amin'ny A350 ary mamahana azy ireo ho fitaovana siantifika ho an'ny fanadihadiana.
"Ny SAF dia hita fa manana dian-tsolika karbônina ambany kokoa noho ny tsingerin'ny androm-piainany raha oharina amin'ny solika jet mahazatra ary ankehitriny dia hitantsika fa mahasoa amin'ny fampihenana ny tsy CO.2 "hoy i Markus Fischer, mpikambana ao amin'ny Birao Divisional an'ny DLR momba ny Aeronautics. "Ny fitsapana toy izany dia manohy mampitombo ny fahatakarantsika ny SAF 100%, ny fampiasana azy amin'ny sidina ary mahita famantarana tsara momba ny mety ho fanalefahana ny toetr'andro isika. Tsy andrinay ny handalina ny angon-drakitra avy amin'ny andiany faharoa amin'ny sidina ECLIF3, izay natomboka tamin'ny sidina fanenjehana voalohany teo ambonin'i Mediterane tamin'ny fiandohan'ity volana ity.”
Tamin'ny taona 2015, nanao ny fanentanana ECLIF1 ny DLR, nanadihady ny solika hafa miaraka amin'ny fiaramanidina fikarohana Falcon sy A320 ATRA. Ireo fanadihadiana ireo dia nitohy tamin'ny taona 2018 niaraka tamin'ny fanentanana ECLIF2 izay nahitana ny A320 ATRA nanidina niaraka tamin'ny fifangaroan'ny solika mahazatra ary hatramin'ny 50% HEFA. Ity fikarohana ity dia nampiseho ny fahombiazan'ny famoahana solika hatramin'ny 50% SAF ary nanamboatra ny lalana ho an'ny sidina fitsapana SAF 100% ho an'ny ECLIF3.